Apartments from Myayinanda Housing to be sold this year | Myanmar Business Today
HomeBusinessApartments from Myayinanda Housing to be sold this year
BusinessLocalProperty & Real Estate
Apartments from Myayinanda Housing to be sold this year
Over 500 apartment units from Myayinanda Affordable Housing, developed by Mandalay City Development Committee, will be sold for the fourth time this year.
The committee in June has sold over 580 units from the project for the third time.
The apartment units sold during the third sales were quoted at K28.84 million for 661 square feet ground floor apartment, K25.75 million for first-floor apartments, K23.115 million for second-floor apartments, K21.115 million for third-floor apartments and K18.025 million for fourth-floor apartments.
The committee started implementing the project in 2016 and started selling apartments from 28 apartment buildings in the project for the first time in 2018 and another batch from the other 19 buildings for the second time in 2019.
The committee, to sell the apartments from the project, started selling application forms at K500 to in-service and retired civil servants on June 17-30. A total of 1,211 in-service civil servants and 412 retired servants.
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ထားသည့် မြရည်နန္ဒာ တန်းဖိုးမျှတအိမ်ရာ တိုက် ၂၁ လုံးမှ တိုက်ခန်း ၅၀၀ ကျော်ကို မဲစနစ်ဖြင့် စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် ယခုနှစ်အတွင်း ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်။
တတိယအကြိမ်အဖြစ် ဇွန်လအတွင်းက တိုက် ၂၁ လုံးမှ တိုက်ခန်းပေါင်း ၅၈၀ ကျော်ကိုရောင်းချပြီးဖြစ်ကာ စတုတ္ထအကြိမ်အဖြစ် ထပ်မံ ရောင်းချရန်စီစဉ် နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လအတွင်း ရောင်းချခဲ့သော တိုက်ခန်းများမှာ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းလျှင် အကျယ်အဝန်း ၆၆၁ စတုရန်းပေရှိကာ မြေညီထပ်တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၂၈၈ ဒသမ ၄ သိန်း ပထမထပ်တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၂၅၇ ဒသမ ၅ သိန်း ဒုတိယထပ်တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၂၃၁ ဒသမ ၁၅ သိန်း တတိယထပ်တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၂၁၁ ဒသမ ၁၅ သိန်း စတုတ္ထထပ်တစ်ခန်းလျှင် ငွေကျပ် ၁၈၀ ဒသမ ၂၅ သိန်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသည် မြရည်နန္ဒာတန်ဖိုးမျှတ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် အဖြစ် တိုက် ၂၈ လုံးမှတိုက်ခန်းများစတင် ရောင်းချခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် တိုက် ၁၉ လုံးမှ တိုက်ခန်းများရောက်ချခဲ့ကာယခုနှစ်တွင် ဆက်လက်ရောင်းချ လျက်ရှိသည်။
တည်ဆောက်ပြီးစီးနေသည့် မြရည်နန္ဒာ ရပ်ကွက်ရှိ တန်ဖိုးမျှတအိမ်ရာ တိုက်ခန်းများကိုမန္တလေးခရိုင် ခြောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဘက်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း များအတွက် ရောင်းချပေးနိုင်ရန် လျှောက်လွှာတစ်စောင်လျှင် ကျပ် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဇွန် ၁၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရုံးဝင်းအတွင်း ရောင်းချပေးခဲ့ရာ လာရောက်လျှောက်ထားသ အရပ်ဘက်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၁၂၂၁ ဦးနှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်း ၄၁၂ ဦး စုစုပေါင်း လျှောက်လွှာ ၁၆၃၃ စောင်ကို ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleGovt to Borrow $170.72 Mln for Electrification Project
Next articleGovt to give K40,000 per household in July and August